China 180cm china sex boy male sex doll olon-dehibe silika saribakoly saribakoly silikôla ultra-realistika lahy ho an'ny mpanamboatra sy mpamatsy | Shaoman
180cm sinoa lahy lahy sy vavy lahy sy vavy saribakoly olon-dehibe silika saribakoly silikôla firaisana ara-nofo tena izy ho an'ny vehivavy
hahavony 175cm Lanja 58kg andilany 81cm
valahana 97cm Haben'ny kiraro 48 Bust 100cm
Tongotra 92cm Tongotra 29cm vozony 30cm
filahiana 16.5cm Halavan'ny tanana 16.5cm Ny halavan'ny sandry 52cm
Sakan'ny soroka 49cm Ny halavan'ny valahana 86cm Haben'ny fonosana 160X50X35 cm
Tombontsoa Saribakoly firaisana ara-nofo silikô mafy
1.100% fitaovana ara-pahasalamana tsy misy poizina. Namboarin'i ROHS, REACH ary FDA.
2. Vagina Pussy silika malefaka tsara indrindra.
3. Ekeo ny kaomandy kely sy ny OEM.
4. Manolora vidiny mifaninana.
5. Mora ampiasaina sy miasa.
6. Serivisy azo antoka sy avo lenta
7. Izay mety ho paozy araka ny itiavanao azy
8, Ny tarehy tsara tarehy dia sokitra amin'ny sary sokitra efa za-draharaha.
Ny Lady dia nanolotra lehilahy maro kokoa amin'ny fahafinaretan'ny TOMPO fa tsy fampidirana hafa. Rehefa miditra an'ity vehivavy ity ianao. Miomàna handray fahafaham-po amin'ny firaisana amin'ny ambaratonga vaovao sy manaitaitra, ity fampidirana miloko milamina ity dia famerenana amin'ny laoniny ny fivavian'ny tovovavy.
Fanamarihana: Aza hadino ny mampiasa menaka manitra ampy hahafahana mampiasa tsara sy hisorohana ny fikororohana izay mety hiteraka fahasosorana amin'ny hoditra.
Rehefa avy mivarotra dia manolotra saribakoly momba ny firaisana ara-nofo:
1. Ny saribakoly tsirairay dia 5 taona ny fiainany miasa. Raha tapaka ny saribakoly ao anatin'ny 5 taona, dia afaka manome rano lakaoly manokana izahay hanamboarana azy, hanome ny horonantsary teknolojia fanamboarana izahay hampianarana anao ny fomba fanaovan-javatra. Fa ianao kosa mandoa ny vidin'ny fandefasana.
2.Ny saribakoly rehetra dia manome sterilizer plastika maimaim-poana ho anao.
3.Pls manamarika fa tsy afaka manao akanjo miloko mainty ho an'ny saribakoly, azonao atao ny manamboatra azy ary manadio azy amin'ny gel mando. ary pls andramo ny lokon'ny akanjo novidinao talohan'ny nampiasanao azy.
4. Mifandraisa pls amin'ny vidiny vaovao indrindra, ary torolàlana bebe kokoa momba ny saribakoly.
fikarakarana: Afaka manome ny ahy ve aho firaisana ara-nofo feno saribakoly fandroana?
Raha misy fandotoana kely ny saribakolinao dia diovy fotsiny amin'ny lamba famaohana lena (faritra fahazoan-dàlana) ny faritra .Raha voaloto be ilay faritra dia ampiasao savony na savony amin'ny vatana. Azo atao ihany koa ny mandro ny saribakolinao, na izany aza sorohy ny loha sy ny faritra iraisan'ny vatana. Avy amin'ny andilana hatrany no alefa. Aza atao ao anaty rano ny lohanao amin'ny saribakoly.
Teo aloha: Silipo malefaka malefaka fitiavana firaisana amin'ny lahy sy ny vavy ho an'ny olon-dehibe kilalao saribakoly firaisana ara-nofo ho an'ny vehivavy
Manaraka: Saribakoly silipo 140cm an'ny olona manerantany amin'ny haben'ny fiainana olon-dehibe kilalao kilalao ho an'ny pelaka zazalahy silikonilahy lahy sy vavy ho an'ny vehivavy